सफलताको यात्रामा आदित्य दुगड, साइकलबाट सुरु भएको व्यापार अहिले ६ सय करोडमा ! « News24 : Premium News Channel
सफलताको यात्रामा आदित्य दुगड, साइकलबाट सुरु भएको व्यापार अहिले ६ सय करोडमा !
काठमाडौं । सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजका निर्देशक आदित्य दुगडको उमेर केवल २५ वर्ष मात्र छ । सानो उमेरमा पनि नयाँ सोचका साथ अगाडि बढेका आदित्यले आज कम्पनीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भएका हुन् । सफल युवा उद्यमी बन्नका लागि आदित्यलाई जीवनमा सधैँ दुई कुराले प्रेरित गरिरहेको छ ।
दुगडले पहिलो प्रेरणाको श्रोतको रुपमा आफ्ना बुवा मोतीलाल दुगडलाई लिएका छन् । करिव ५० वर्ष पहिलेको कुरा हो, जुनबेला उनका पिता मोती दुगड इटहरी र धरानमा साइकलमा खाने तेल बेच्ने गर्थे । उक्त कामबाट मोतीलाल दुगडले हप्तामा २ रुपैयाँ आम्दानी गरेको आदित्यले बताए । सुरुवाती दिनमा आदित्यको बुवाले विभिन्न आर्थिक, पारिवारिक र मानसिक संघर्ष गर्नुपरेको थियो । साथै व्यवसाय गर्ने बेलामा विभिन्न प्र्रकृतिका मानिसहरुले हतोत्साहित गर्ने प्रयास समेत गरेको निर्देशक आदित्यले न्यूज २४ लाई बताए । तर समस्यालाई उच्च मनोवल र इमान्दारिताका साथ समाधान गर्नाले आदित्यका बुवाले आज व्यवसायमा साम्राज्य खडा गरेका छन् ।
सुरुवाती दिनमा हप्ताको २ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने आदित्यका बुवाले आज सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजको स्थापना गरेका छन् । आजको दिनमा यस कम्पनीको ब्राण्ड मूल्य ६ सय करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बुवा मोतीलाल दुगडले गरेको संघर्षको कथाले सधै मष्तिकमा व्यवसायलाई थप उचाईमा पुर्याउन प्रेरणा मिलेको निर्देशक आदित्यले बताए ।
निर्देशक आदित्यले अष्ट्रेलियाबाट लेखा र वित्तीय शिक्षामा स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेका छन् । साथै बेलायतबाट उद्यमशीलतामा स्नाकोत्तरसम्मको अध्ययन समेत पूरा गरेका हुन् । अध्ययनसँगै नेपालको सनराईज बैंकबाट ईन्टर्नशीप पनि गरेका छन् । ईन्टर्नशीप गर्ने क्रममा निर्देशक आदित्यको प्र्रत्यक्ष रुपमा कर्पोरेट संसारमा प्र्रवेश भयो । कर्पोरेट संसारमा रमाउन थाले । कर्पोरेट क्षेत्रमा सरकारको नीति, कर्पोरेटको स्थिति र कर्मचारीको सहयोगले सञ्चालन हुने तथ्य पत्ता लगाए । जसले निर्देशक आदित्यलाई व्यवसायमा झन् उर्जाशील भएर लाग्न प्रेरित गरेको बताए ।
समाजको अपेक्षाको दबाव
परिवारले स्थापना गरेको व्यवसायमा काम गर्न सहज हुने र केहि संघर्ष गर्न नपर्ने भन्नेहरुलाई निर्देशक आदित्यले खरो प्रतिवाद गर्ने गरेका छन् । सफल भएको व्यवसायमा पछिल्लो पुस्तालाई काम गर्न झन गाह्राे हुने उनकाे भनाइ छ । जति अघिल्लो पुस्ताले व्यवसायमा सफलता हासिल ग¥यो त्यो भन्दा बढी अपेक्षा समाजले पछिल्लो पुस्ताबाट गर्ने गरेको छ । समाजको अपेक्षालाई हासिल गर्न सधै मानसिक तनावलाई ग्र्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ । बौद्धिक संशाधनलाई प्रयोग गरेर कर्पोरेट दुनियाँमा पुँजीकरण गर्ने उपायको खोजीमा निर्देशक आदित्य लागिरहेको बताउँछन् । जसले समाजको अपेक्षालाई पुरा गर्न सहयोग पुग्ने उपायको खोजीमा निरन्तर लागिरहेका हुन्छन् । अध्ययन साथमा हुने तर शिपको अभावले समाजको अपेक्षालाई पूरा गर्न नसक्ने उनको अनुभव छ । काममा पूर्ण रुपमा लागेर उच्च मनोबल र प्र्रतिबद्धता नदेखाए सफलता हासिल गर्न नसक्ने तर्क निर्देशक आदित्यको छ ।
सफलताका ‘तीन सूत्र’
सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजलाई आजको उचाईमा पुर्याउने निर्देशक आदित्यको पहिलो सुत्र भनेको राम्राे व्यवस्थापन हो । राम्राे व्यवस्थापनले कम्पनीको चेन अफ कमाण्डलाई सुधार गर्ने, प्रदर्शन र काम गर्ने वातावरणमा समेत सकारात्मक स्थितिको श्रृजना गर्ने गरेको छ । अहिलेको कम्पनीको सफलताको श्रेय पनि उचित व्यवस्थापन नै रहेको उनले बताए ।
हालको संसारमा प्याकेज गरिएको उपभोक्ता सामग्र्री (एफ.एम.सी.जी) मा उच्च प्रतिष्पर्धा रहेको छ । प्रतिपर्धामा अगाडि बढ्नका लागि प्रविधिको पनि ठूलो भूमिका रहको हुन्छ । विश्व सुहाउँदो प्र्रविधिलाई आत्मसाथ गरेर कम्पनीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याएको निर्देशक आदित्यले उल्लेख गरे । हाल गरिरहेको मानव लेखालाई प्र्रविधिको माध्ययमबाट मोवाइलमा रुपान्तरण गर्न पर्ने आवश्यकता रहेको छ । जसले काम गर्ने प्रवृत्तिमा गति ल्याउने र अझ सुधारिएको व्यवसाय हुने बताए । साथै कम्पनीलाई सामाजिक सञ्जालमा जोडेर विश्वमा कम्पनीको उत्पादनलाई विस्तार गर्न सफल भएका छन् । फेसबुक र इन्स्ट्राग्राम जस्ता नयाँ एपमा कम्पनीलाई जोडेर आम्दानी र प्रचारमा धेरै सुधार आएको छ । यो सुत्रका कारण पनि सेञ्चुरीलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन सफल भएको हो ।
निर्देशक आदित्यको सफलताको अर्को सुत्र भनेको सञ्जाल विस्तार हो । स्वदेशी मागलाई पूरा गरेर उनले विदेशमा समेत आफ्नो उत्पादनको उपस्थिति जनाइसकेका छन् । सञ्जाल विस्तारको सुत्रलाई प्रयोग गरेर विश्वका २० भन्दा बढी राष्ट्रमा उत्पादनलाई निर्यात गर्न सफल भएका छन् । सञ्जाल विस्तार गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र नयाँ बजारको खोजी गरिरहनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
निर्देशक आदित्यले अबलम्वन गरेको तीन सुत्रका कारण आज सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीजलाई नसोचेको उचाईमा पुर्याएका छन् । समाजको अपेक्षालाई समेत केहि हदसम्म पूरा गर्न सफल भएका हुन् ।
कोरोना महामारीको समयमा होटल, पर्यटन, हवाई लगायत क्षेत्र नराम्र्रोसँग धरासायी भएको थियो । साथै खाद्यान्न क्षेत्रलाई समेत नराम्रोसँग धक्का दिएको थियो । यस्तो समयमा खाद्यान्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै कठिन थियो । निर्देशक आदित्यको योजना र दुरदर्शी सोचका कारण कोरोनाले पनि कम्पनीको आम्दानीमा ठूलो प्रभाव पार्न सकेन । नेपाल सरकारले दैनिक ३ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थियो । उक्त समयमा पनि १ दिन बराबरको विक्री गर्ने लक्ष्य साथ अगाडि बढ्दा आम्दानीमा खासै प्रभाव नपरेको उनको भनाइ छ । बरु कामदारलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर ५ मिनेटमा माग, भुक्तानी र सामग्रीको सूचीकरण गर्न निर्देशन दिए । तोकिएको काम पूरा गर्ने कामदारलाई उचित पुरस्कार, पदोन्नति र रकमको व्यवस्था समेत गरियो । जसले कोरोनाको समयमा कम्पनीको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्यो । कम्पनीका कामदारलाई परिवार जस्तो व्यवहार गर्दा आर्थिक सफलता हासिल गर्न मद्दत मिलेको उनले बताए ।
आर्थिक प्रगति र सत्ताको शक्ति भनेको अस्थायी विषय हुन् । जीवनमा सिकेको अनुभव र इज्जत भनेको स्थायी विषय हुन् । मानिसले जीवनमा सधै इज्जत कमाउनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । कसैलाई पनि र्दुव्यवहार गर्न नहुने उनको मान्यता छ । मानिसको असल व्यवहारले अदृश्यरुपमा आर्शीवाद पाउने विश्वास पनि उनको छ । इमान्दारिता र उच्च मनोवलका साथ कार्य सम्पादन गरे जीवनमा असम्भव केही नभएको उनी बताउँछन् । व्यवसाय सञ्चालन र सफल बनाउन पारिवारिक पृष्ठभूमि आवश्यक नरहेको र आर्थिक रुपमा सम्पन्न पनि हुनु नपर्ने उनको सुझाव छ ।
नयाँ पुस्ताले आर्थिक, पारिवारिक र मानसिक संघर्षलाई उच्च मनोवल र इमान्दारिताको साथ समाधान गरे व्यवसायिक सफलता हासिल गर्ने सक्ने निर्देशक आदित्यको अपिल छ ।
प्रस्तुति : रविन ठकुरी (टिभी जर्नलिष्ट)
जाजरकोट : रात्रिकालीन अवतरण गर्ने हेलिप्याड निर्माण
रासस, जाजरकोट । तीन मुख्य राजमार्गको बीचमा पर्ने जाजरकोटमा नेपाली सेनाले राति पनि हेलिकप्टर अवतरण